Dr. Ngun Cun Lian bia chim mi cu fih nung tak tak – Thechinlungnews
Dr. Ngun Cun Lian bia chim mi cu fih nung tak tak
Chinmi lak ah mifim tiah ti ve mi Dr. zongasi mi Dr. Ngun Cung Lian nih Democracy caah nunnakape mi Aungsan Suh Kyi le NLD partyadoh hna ning hi cu amak bak ko, A soisel pah hna lawng siloin USDP paety duh ning le Kawl ralkap duh zawng bak in biaachim zungzal ko.
A peh rih mi cu” 2015 lioah mipi sinah bia an rak kamh miasi cang i, Mee tampi hmuh duh ahasi,atu zong thimnakanai tuk cang caah an au sawhsawh than iasi tiah zei rel lo taktak in aleh hna. 2008 phunghram oi hi i thleng dih seh tiah mipi nih saduh thah mi cioasi i Dr. Ngun Cung Lian zong media nih bia an hal tikah saduhthah nganpi he an hal nain hitihi aleh diam ko hna.
ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်တဲ့အပေါ် အပျင်းပြေလုပ်နေတာလို့ ဒေါက်တာဆလိုင်းငွန်ကျုံးလျန်ပြော
ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ဖို့လုပ်နေတဲ့အပေါ် အပျင်းပြေလုပ်နေတာလို့ ဒေါက်တာဆလိုင်းငွန်ကျုံးလျန်ပြော—— အကုန်သိသတင်းဌာန ——“ စိတ်မဆိုးနဲ့ တစ်ခွန်းပဲပြောမယ်၊ အပျင်းပြေလုပ်နေတာ။ ဘာမှစဉ်းစားပြီး လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အကုန်ဖတ်ပြီးပြီ။ အပျင်းပြေအလုပ်။ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ” လို့ ဒေါက်တာ ဆလိုင်း ငွန်ကျုံးလျန် က အခုလိုပဲပြောလာပါတယ်။ရိုက်ကူး/တည်းဖြတ် – မင်းသီဟန်၊ စည်သူဟိန်းUnicode Versionဖှဲ့စညျးပုံ ပွငျဆငျဖို့လုပျနတေဲ့အပျေါ အပငျြးပွလေုပျနတောလို့ ဒေါကျတာဆလိုငျးငှနျကြုံးလနျြပွော—— အကုနျသိသတငျးဌာန ——“ စိတျမဆိုးနဲ့ တဈခှနျးပဲပွောမယျ၊ အပငျြးပွလေုပျနတော။ ဘာမှစဉျးစားပွီး လုပျနတောမဟုတျဘူး။ကြှနျတျောအကုနျဖတျပွီးပွီ။ အပငျြးပွအေလုပျ။ ဖွဈမှာမဟုတျဘူး။ ” လို့ ဒေါကျတာ ဆလိုငျး ငှနျကြုံးလနျြ က အခုလိုပဲပွောလာပါတယျ။ရိုကျကူး/တညျးဖွတျ – မငျးသီဟနျ၊ စညျသူဟိနျး#MIPSဒါရိုက်တာမေးခွန်းထုတ် #ဆလိုင်းငွန်ကျုံးလျန် #ပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက်(၅၁)ချက် #Akonthi
Posted by AKonThi on Tuesday, February 18, 2020
Be the first to comment on "Dr. Ngun Cun Lian bia chim mi cu fih nung tak tak"